मनोरञ्जन Archives - बडिमालिका खबर
काठमाडौं — नेपालीभाषी गायक विपुल क्षेत्री विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड ग्रामीको सदस्यमा मनोनित भएका छन् । रेकर्डिङ एकेडेमीले क्षेत्रीसहित दुई हजार भन्दा बढी विश्व संगीतका सर्जकलाई सदस्यतामा नियुक्त गरेको जनाइएको छ । सदस्य नियुक्त भएसँगै क्षेत्रीले सन् २०२२ को ग्रामी अवार्डमा मतदान अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । रेकर्डिङ एकेडेमीले यसै साता क्षेत्रीलाई सदस्य बन्न निम्तो दिएको […]
“फापरको पिठो पठाईदेउ आमा यहाँ, चामल सारै नै महगो सहरमा बाँच्न गारो भो आमा यहाँ, त अचेल सबै थोक महगो” । बाजुरा — बालगायक सुप्रिम मल्ल जब स्टेज गाउँन थाले सबैलाई भाबुक बनाए । बाजुरा घर भएका मल्लले मंगलवार […]
१९ वर्षका दुई विद्यार्थी जसले दिलाए कैदीबन्दीलाई मताधिकार
नेपालमा हलमा पहिलो पटक भोजपुरी फिल्मले ठूलो प्रदर्शनको थालनी गर्ने भएको छ । नेपाली निर्देशक चन्द्र पन्तले बनाएको भोजपुरी फिल्म ‘रण’ ले त्यसको सुरुवात गर्न लागेको हो । फिल्म शुक्रबारबाट काठमाडौं र उपत्यका बाहिर गरेर ४० बढी हलमा लाग्ने निर्देशक पन्तले बताए । ‘राजधानीका केहि मल्टिप्लेक्ससँग समेत कुरा भइरहेको छ’, पन्तले भने ‘विश्वज्योती लगायतका केही […]
सुरज पण्डितकाे रेलको बाटो २ सिंहदरबार बोलको गित सार्वजनिक (भिडीयाे सहित)
बाजुरा — रेलकाे बाटो गितको सफलता पछि सुरज पंडितको शब्द संगित र स्वर रहेको रेलको बाटो २ सिंहदरबार बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । लक्ष्मण सुनारको निर्देशनमा निर्माण भएको यस गितको भिडियोमा सुदुर र कर्णाली प्रदेशको जिवन शैलीको कथा दु:ख संगै राज्यले गर्ने व्यवहारको समेत समेटिएको छ। रेलको बाटोको अपार सफलतापछि गायक सुरज पण्डितले रेलको […]
अबको बाटो : गम्भीर होइन, विशेष फिल्म
काठमाडौं –‘कबड्डी ४’ले २८ दिनसम्म २२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाउँदै सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्मको कीर्तिमान राख्यो । तर, यसको बक्सअफिस अंकगणित पछाडि लुकेको कारण र प्रभावलाई लिएर फिल्म पण्डितबीच डिस्कोर्स सुरु भएको छ । कतिपय विश्लेषक बक्सअफिस सफल हुँदैमा त्यसलाई विशेष फिल्म मान्न नसकिने तर्क गर्दैछन् । मानकबिनाको सफलता घरेलु फिल्मको भविष्यको लागि […]
धनगढी — राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले सामाजिक सदभावमा खलल पुर्‍याउने, अभद्र, द्विअर्थी र अपाच्य किसिमका तीज गीत सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ। अध्यक्ष रमेश बीजीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थागत आग्रहलाई बेवास्ता गरिए साधारण सदस्यता लगायत संस्थागत सेवाबाट समेत बञ्चित गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तीज गीतमा विकृति, विसंगति र अभद्र श्रव्यदृश्य समावेश भएको गुनासो […]
नेपाली कलाकार आबद्ध भोजपुरी फिल्म शुक्रबारदेखि नेपाली हलमा
काठमाडौं — नेपालमा देशव्यापी रुपमा सम्भवतः पहिलोपटक भोजपुरी भाषाको फिल्म रिलिज हुने भएको छ । नेपाली निर्देशक चन्द्र पन्तको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘रण’ले तीन दर्जनभन्दा बढी हलबाट प्रदर्शन थाल्न लागेको हो । राजधानीसँगै मोफसलका ४० बढी हलमा शुक्रबारदेखि ‘रण’ प्रदर्शनमा आउने निर्देशक पन्तले जानकारी दिए । ‘राजधानीका केही मल्टिप्लेक्ससँग कुरा भइरहेको छ, विश्वज्योति लगायतका केही […]
मोडल वाच : डाक्टर सुन्दरी सरिशा र वाचाल न्यान्सी !
काठमाडौं — ललितपुरकी सरिशा श्रेष्ठ पेशाले चिकित्सक हुन् भने विराटनगरकी न्यान्सी खड्का मोडलिङ पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् । यी दुई सुन्दरीले गत साता मिस नेपालका दुई महत्वपूर्ण टाइटल जितेका छन् । सरिशाले मिस नेपाल अर्थ र न्यान्सीले मिस नेपाल इन्टरनेसनल उपाधि जितेका छन् । सौन्दर्यसँगै बौद्धिक क्षमताका यी दुई सुन्दरी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय पेजेन्टमा नेपालको नाम चम्काउन […]
दोहोरी गायिका दिलमाया सुनार मृत भेटिएकी छन् । प्रहरीका अनुसार शनिबार राति ११ बजे काठमाडौंस्थित आफ्नै डेरामा उनी मृत्य अवस्थामा भेटिएकी हुन् । सुर्खेत घर भएकी ३० वर्षीया गायिका सुनार काठमाडौंको नेपालटारमा डेरामा बस्दै आएकी थिइन् । उनले शुक्रबार आफू बाँच्न मुस्किल भएको भन्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटससमेत लेखेकी थिइन् । प्रहरीले घटना अनुसन्धानका क्रममा […]
पूर्व मिस ब्राजिल ग्लेसी कोरेइयाको २७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । टन्सिन निकाल्नका लागि गरिएको शल्यक्रियाका कारण उनलाई ब्रेन ह्यामरेज र हृदयघात भएको थियो । इन्डिपेन्डेन्टका प्रकाशित समाचारका अनुसार सन् २०१८ मा मिस युनाइटेड कन्टिनेन्ट ब्राजिलको उपाधिकी बिजेता कोरेइयाको सोमबार एक नीजि क्लिनिकमा निधन भएको हो । उनी पछिल्लो दुई महिनादेखि कोमामा थिइन् । […]
राजा वीरेन्द्रले विभूषण दिएका भारतीय सेनापतिमाथि फिल्म ‘श्याम बहादुर’ बन्ने
काठमाडौं — सन् १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्धताकाका भारतीय सेनापति साम मनिक्सालाई लिएर बायोपिक फिल्म ‘श्याम बहादुर’ निर्माण हुने भएको छ । मेघना गुल्जारले निर्देशन गर्ने फिल्ममा बिक्की कौशलको मुख्य भूमिका हुनेछ । बिक्कीले गुल्जारको अघिल्लो फिल्म ‘राजी’मा समेत अभिनय गरेका छन् । बिक्कीले इन्स्टाग्राममार्फत यो फिल्मको निर्माण सुरु भएको जनाएका छन् । गोर्खा सैनिकमाझ चर्चित […]
‘कबड्डी ४’लाई नेपालमा २२ करोड, सिंगापुर प्रिमियरमा दयाहाङको आकर्षण
काठमाडौं — फिल्म ‘कबड्डी ४’ले प्रदर्शनको २३ दिनमा २२ करोड ७ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको छ । यो कमाइमा आइतबारको रकम जोडिएको छैन । कबड्डीको चौथो सिक्वेलले नेपाली बक्स अफिसमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने ‘बाहुबली २’को २३ करोड ग्रसलाई उछिन्ने संकेत देखिएको छ । दोस्रो सातामा फिल्मले ‘छक्कापञ्जा २’को २० करोड रेकर्डलाई उछिनेको थियो । […]
‘२ नम्बरी’को फस्टलुक सार्वजनिक, यस्तो छ दयाहाङ र सौगातको गेटअप
काठमाडौं — दयाहाङ राई र सौगात मल्ल स्टारर फिल्म ‘२ नम्बरी’को फस्टलुक सार्वजनिक गरिएको छ । दीपेन्द्र लामाको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्ममा दयाहाङ र सौगातलाई फरक गेटअपमा देखाइएको छ । रेड बर्ड प्रोडक्सनको प्रस्तुति रहेको फिल्मको फस्टलुकमा उपासना सिंह ठकुरी, उगेन छोदेन र बुद्धि तामाङ पनि अटाएका छन् । दीपक मनाङ्गे, अमलादेवी राई र […]
‘चिसो मान्छे’ फिल्म मात्र होइन, ‘लेगो’ पनि हो, आफैं जोडेर कथा पूरा गर्नुहोस्
तपाईंले कहिल्यै चित्रकला सम्बन्धी एउटा खेल खेल्नुभएको छ ? जहाँ कुनै जनावरको चारवटा खुट्टा र टाउको मात्रै बनाइएको हुन्छ र शरीरका अन्य कुनै पनि भाग बनाइएको हुँदैन। दिइएका त्यति नै कुराहरूमा थपेर, जोडेर तपाईंले त्यो चित्र पूरा बनाउनुपर्नेछ। त्यो चित्र कस्तो बन्ला ? जवाफ सहज छ। यदि तपाईं चित्रकलामा पारंगत हुनुहुन्छ भने त्यो चित्र गज्जबको […]
काठमाडौंकी प्रियंका रानी जोशीले यसवर्षको मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि पाएकी छन् । ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उनले उपाधि जितिन् । उनलाई मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठले ताज पहिर्‍याइदिइन् ।काठमाडौंकी प्रियंका रानी जोशीले यसवर्षको मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि पाएकी छन् । ललितपुरको गोदावरीमा शनिबार सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उनले उपाधि जितिन् । त्यस्तै सरिशा श्रेष्ठ मिस […]
आज हुँदैछ मिस नेपालको ग्रान्ड फिनाले, २४ जना सुन्दरीबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं — मुलुकले आज नयाँ मिस नेपाल प्राप्त गर्नेछ । बेलुका ललितपुरमा हुने ग्रान्ड फिनालेमा २४ जना सुन्दरीबीच ताजको लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । कोरोना महामारीको कारण अघिल्ला दुई वर्षमा रोकिएको मिस नेपाल यसपटक भने भौतिकरुपमै आयोजना हुन लागेको हो । द हिडन ट्रेजरले यसपटकको संस्करणलाई भव्य तुल्याइने जनाएको छ । ६ जना चिकित्सकसहित विभिन्न पेसा […]
नेपाली चलचित्र ‘चिसो मान्छे’आजबाट प्रदर्शनमा आएको छ। स्वस्तिमा खड्का र अर्पण थापाको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म चिसो मान्छे प्रदर्शनमा आएकाे हाे । सुदूरपश्चिमकाे कथा बोकेको याे चलचित्रलाई दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेका हुन्। उनले यसअघि पशुपतिप्रसाद, आमा लगायत चलचित्र निर्देशन गरेका थिए। कोरोना महामारीको बीचमा कतारबाट ल्याइएको श्रमिकको शवलाई काठमाडौंदेखि बाजुरासम्म पुर्‍याउन गरिएको असजिलो यात्राको […]
विदेशमा ‘कबड्डी ४’ चल्दा ‘प्रकाश’लाई फाइदा, रिलिजअघि नै १ करोड नेट
काठमाडौं — विदेशमा ‘कबड्डी ४’ले राम्रो कमाइ गर्दा यसको प्रत्यक्ष फाइदा अर्को नेपाली फिल्म ‘प्रकाश’लाई देखिएको छ । सोमबारसम्म अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र क्यानडाको प्रदर्शन अधिकार बिक्रीबापत फिल्मले ७५ लाख रुपैयाँ नेट कमाएको छ । मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया, जापान र बेलायतमा राइट बिक्री भएबापत फिल्मले ३० लाख रुपैयाँ नेट प्राप्त गर्नेछ । विदेशबाट मात्र फिल्मले […]
‘कबड्डी ४’को रकर्ड, १६ दिनमा २० करोडको आम्दानी
काठमाडौं– प्रदर्शन भएसँगै चर्चामा रहेको र व्यापारिक रुपमा पनि सफल देखिएको फिल्म ‘कबड्डी ४: द फाइनल म्याच’ले हालसम्मकै धेरै कमाउने नेपाली फिल्म बनेको छ। फिल्मले प्रदर्शन भएको दुई साताभन्दा धेरै दिन भइसक्दा पनि राम्रो आम्दानी गरिरकेको छ। फिल्मका वितरककाअनुसार फिल्मले यो समयमा कूल २० करोडभन्दा धेरै आम्दानी गरेको छ। फिल्मले काठमाडौंभित्रको प्रदर्शनबाट १० करोड ७५ […]
अनुहारमा पक्षघात भएपछि जस्टिन बिबरको ‘वर्ल्ड टुर’ रोकियो
काठमाडौं — भाइरसका कारण अनुहारको आधा भाग नै पक्षघात भएका क्यानडेली पपस्टार जस्टिन बिबरको स्वास्थ्यलाभ हुने संकेत देखिएको चिकित्सकले जनाएका छन् । शनिबार एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै ‘बेबी’ गायकले रामसे हन्ट सिन्ड्रोमबाट आफू संक्रमित भएको जनाएका थिए । उक्त सिन्ड्रोमले कान र अनुहारको नसामा असर भएको तथा दाहिने आँखा झिम्काउन नसकिरहेको उल्लेख गरेका थिए […]
तपाईंको ओठ रातो वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो रङको किन हुन्छ भन्नेबारे कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हामी हरेक दिन ओठको उपयोग गर्छौँ । भिन्न भिन्न कामका लागि । यो यति नाजुक किन हुन्छ ? यो किन सुक्न थाल्छन् ? यो किन फुट्छन् ? मानिसको विकास त्यसरी किन भयो कि उनीहरुको ओठ बने जबकी पंक्षी, कछुवालगायतका जीव–जन्तुको किन […]